Looks Nepal | » प्रधानमन्त्री ज्यू जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुस : नेतृ झाँक्री Looks Nepal प्रधानमन्त्री ज्यू जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुस : नेतृ झाँक्री – Looks Nepal
Apr, 14, 2020	looksnepal
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकि छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ४८ सम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने बताएकी हुन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई लामाे सुझाव दिएकि छन् । जुन यश प्रकार रहेकाे छ :
सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिघा खाने कति छन? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ।त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला। दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५-८/९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउन पर्ने?
त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला। आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ?
राष्ट्रिय आयले साधरण चालु खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल गर्न कटौति गर्न सक्छ।पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।
नेता झांक्रिकाे याे स्टेटसलाई सामाजिक संजालमा धेरै राम्राे प्रतिक्रिया आईरहेकाे छ ।